XOG Cusub: Qorshe uu Mukhtaar Roobow uga baxsan lahaa xabsi guriga Muqdisho oo fashilmay -News and information about Somalia
Home Warkii XOG Cusub: Qorshe uu Mukhtaar Roobow uga baxsan lahaa xabsi guriga Muqdisho...
XOG Cusub: Qorshe uu Mukhtaar Roobow uga baxsan lahaa xabsi guriga Muqdisho oo fashilmay
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa daboolka ka qaadaya in uu fashil kusoo dhamaadey qorshe uu Mukhtaar Roobow damacsanaa in uu ku baxsado.
Hogaamiye ku xigeenkii hore ee Al-Shabaab ayaa haatan wuxuu ku jiraa xabsi guri ku yaala magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho.
Illo wareedyo ayaa ku waramaya in ciidamadda ammaanka ay ka heleen xogta ku saabsan baxsashada Roobow kadibna ay tageen guriga.
Hoyga ayaa wuxuu ku yaalaa meel ku dhow Madaxtooyadda, halkaas oo ciidamo si gaar u tababaran ay ku ilaaliyaan.
Qorshaha baxsashadda ayaa ahaa in uu marka hore codsado in uu dibadda ku socdo kadibna banaanka gaari soo istaago kadiba fakado.
Balse, ammaanka oo aad u adkaa ayaa keentay, waxaana xitaa lagu dhowaaday in la dhaawaco markii uu isku dayey in uu iska caabin sameeyo.
Mukhtaar Roobow ayaa Muqdisho ugu xiran Dowladda Soomaaliya, isaga oo loo haysto eedeymo la xiriira in uu sameeyay amar diido.
Previous articleSoomaaliya oo bil kadib ku dhawaaqi doonta shatiga shidaal dhan 30 bilyan oo fuusto
Next articleCiidamada Itoobiya oo mas’uuliyiin caan ah iyo saraakiil ciidan ku xiray gobolka Gedo & Digniino soo baxaya
Akhriso:-Wasiir Goodax Barre Oo Magacaabay Guddi Cusub
Madaxweynaha Puntland Oo Kulan Deg Deg Ah Is Kugu Yeeray Golihiisa...